Kuwedzeredza Kugadzirwa kweZvivakwa zveMabhizimusi | Createproto - Createproto Tech Co., Ltd.
INDUSTRIES / Chigadzirwa kusimudzira
Prototyping chiitiko chakakosha mune dzakawanda nyowani zvigadzirwa zvigadzirwa zvigadzirwa. Kunyangwe chinangwa chiri chekutsvaga mikana mitsva kana kugadzirisa mhinduro dziripo, prototyping inogona kuve chishandiso chakakosha.
CreateProto ishamwari inovimbwa mune dzepasi rose chigadzirwa kuvandudza prototyping services. Chikwata chedu chemainjiniya ane ruzivo chakabatsira vashoma, vepakati, uye vezvemabhizimusi nhanho vatengi kushandura kwavo zvigadzirwa mazano kuva echokwadi nekupa zvisingaenzaniswi prototyping uye kugadzira.
Prototype-kune-Kugadzirwa kweChigadzirwa Development Maitiro
Prototype Iterations muChigadzirwa Management
Zano rebhizinesi rebhizinesi rakashandurwa kuti "ripindure nekukurumidza kune zvido zvemusika", uye iyo nguva chinhu iri pamusoro pezvose. Pasi pechinodikanwa, kukwikwidza kwemabhizinesi kuri munzira yekugadzira prototype nekukurumidza sezvinobvira kuti ione dhizaini yevanogadzira zvigadzirwa, uye voita chigadzirwa chitsva chiende kumusika nekukurumidza.
Iyo chigadzirwa kuvandudzwa mune yekutanga nhanho inguva refu uye yakaoma maitiro kusvikira pfungwa dhizaini yekuenzanisira kuvandudza. Nekudaro, danho iri rakakosha kwazvo usati waenda mukugadzirwa kwakawanda. Muchokwadi, zvigadzirwa zvechigadzirwa zvinogona kusimbiswa mukati meyese dhizaini uye kusimudzira kutenderera, kusanganisira edzidziso mamodheru, mapikicha ekuratidzira, anoshanda prototypes, enjiniya prototypes uye yakaderera vhoriyamu yekugadzira. Yakakodzera mashandisirwo ema prototype matekiniki anogona kuita kuti nyowani yechigadzirwa yekuvandudza maitiro ive nesimba uye inoshanda, ichideredza mukana wekutadza.
Kukosha kweChigadzirwa Prototypes muKubudirira Maitiro
Ziva uye uongorore pfungwa. Gadzira zvigadzirwa zvigadzirwa muchiyero chinogadzirika uchishanda kuti umise zvakadzama ruzivo uye unzwisise zvakakwana dhizaini dhizaini kuburikidza nehumbowo-hwe-pfungwa prototypes
Kurukura mazano zvinobudirira. Mawonesi ekuratidzira emamodeli anopa simba vagadziri kuti vagovane pfungwa dzavo nevavanoshanda navo, vatengi, uye vanobatirana navo kuti vafambise yakajeka, inoitisa mhinduro.
Dhizaina iterations inochinja-chinja. Inoshanda prototype kuvandudza inogona kushandiswa kuyedza dhizaini iterations uye kugadzirisa chigadzirwa chako kuita. Rega chero nyaya dziwanikwe uye dzigadziriswe musati wasvika kune yekupedzisira chigadzirwa, uye yakaderedzwa bhizinesi njodzi.
Enda kune yakazara kugadzirwa uine chivimbo. Kugadzira michina yeinjiniya inoenderana neyekupedzisira chigadzirwa inoita kuti zvive nyore kuongorora dhizaini, mainjiniya, uye kugadzirwa mune prototype yekuvandudza maitiro usati waisa mari muzvishandiso zvinodhura uye kuzviisa mukugadzirwa.
Mari-inoshanda yakaderera vhoriyamu yekugadzira. Rapid tooling uye tsika yakaderera-vhoriyamu yekugadzira ichakwanisa kubvarura iyo gaka pakati pe prototype uye kugadzirwa, uye ita kuti chigadzirwa chako chiende kumusika nekukurumidza pamutengo unodhura.
Unyanzvi hweGadziraProto Huchipa Rutsigiro Ruzere kuburikidza neRese Gadziriso Maitiro
CreateProto yanga ichizvipira kupa inokurumidza, yakakwira-inoshanda chigadzirwa prototype kuvandudza uye nekukurumidza kugadzira mhinduro kune ese mafambiro ehupenyu emakambani mumaindasitiri, hazvina basa kubva kune vekutengesa kune zvigadzirwa zvevatengi kana kubva kune zviridzwa nemidziyo kune zvigadzirwa zvemadhijitari uye zvishandiso zvemumba. Yedu portfolio yechigadzirwa prototype yekugadzira inovimbisa dhizaini dhizaini, inosangana bvunzo uye kuongorora, uye pakupedzisira inounza kubudiriro yekambani.
Panguva imwecheteyo, isu tinovavarira kuve wako akanakisa azere sevhisi chigadzirwa kuvandudza mudiwa muindastiri. We dzidzira dzakasiyana prototyping uye kugadzira michina, kupa CNC machine, 3D kudhinda, Vacuum Kudzingwa, nokukurumidza tooling, uye pasi vhoriyamu jekiseni Kuumbwa, izvo kuramba yemakwikwi unopinza pamwe utsanzi basa uye zvikuru unyanzvi vashandi. Tichashanda pamwe chete - uye newe - kuburikidza nhanho dzese dzechigadzirwa dhizaini uye yekuvandudza maitiro kusvikira prototype kugadzirwa.
Prototype Chikumbiro cheChigadzirwa Chigadzirwa Mune ese maindasitiri
Zvishandiso & Zviridzwa Prototyping
GadziraProto inogadzira akasiyana siyana zvigadzirwa prototype yemidziyo uye zvishandiso zvinoshandiswa neinjiniya-giredhi mapurasitiki uye simbi mune akawanda mashandisirwo. Nezvinhu zvakafanana nezvechigadzirwa chekupedzisira, prototypes inonyatso kuenzanisa mashandiro anoita, emagetsi zvivakwa, chemakemikari anodzivirira, anodziya zvivakwa, uye hupenyu hupenyu kuyedzwa kweyekupedzisira shandisa chigadzirwa. Saka kuti iwe unzwisise zvakajeka mashandiro anoita chikamu kana gungano kana rikaiswa kune chaiyo-yepasi nharaunda inomiririra izvo zvaichaona mukushandisa kwayo chaiko.
Yedu yepamusoro tekinoroji uye hunyanzvi hunobvumidza mahunyanzvi edu kuumba yakaoma prototype yemashandiro ekushandisa kutarisa fomu uye kukwana, kuve nechokwadi chekuti zvikamu zvese zvinokwana mukati megungano remidziyo inodhura nemidziyo yakawanda yezvinhu. Kubva paku prototyping kusvika mukugadzira, isu tinoona kuti mashandiro etsika yako yakagadzirirwa chimbo nemidziyo zvinosangana nezvakanakisa zvaunoda uye zvaunotarisira.
Zvekutengesa & Hofisi Prototyping
GadziraProto's prototyping tekinoroji kugona kwakakodzera kwazvo kune vekutengesa uye ehofisi otomatiki michina (OA zvigadzirwa) vagadziri vane zvinhu zvakagadzirwa kune zvako chaizvo zvirevo. Iyo prototype kuvandudza inomiririra zvakatendeka hunhu hweyekupedzisira-chigadzirwa, kusanganisira iyo yekutenderera kurongeka kwekuunganidza mating zvikamu, kutarisa dhizaini dhizaini uye yakavanzwa mativi misiyano uye kushivirira.
Tinogona kushandisa yedu yehunyanzvi ruzivo mune yakakwira-chaiyo CNC machining uye nekukurumidza maturu ekupa yakanakisa kuraira pazvinhu zvinoenderana nezvinhu, maitiro, kushivirira, uye kufanotaura zvingangodaro matambudziko ekubatsira kugadzirisa ako einjiniya matambudziko. Nemainjiniya ehunyanzvi uye mamaneja eprojekti, GadziraProto haina akaenzana mukugadzirwa kwechigadzirwa uye inogara ichichengetedza kubatana pamwe nevatengi, inokwanisa kupa rutsigiro rwunoramba ruripo mukugadzirwa kwechigadzirwa.
Dhijitari & Zvishandiso Prototyping
Mune yemakwikwi yevatengi zvigadzirwa munda, zvese zvatinoita pano paGadziraProto zvinotarisana nekupa yakanakisa mhando prototyping muindastiri - nenguva uye mutengo. GadziraProto inogadzira yemhando yepamusoro yekuratidzira mamodheru zvakangofanana kune izvo chaizvo zvigadzirwa. Aya mamodheru akadhirowewa akakodzera kuti ashandiswe mumapoka anotarisisa, maratidziro ekutengeserana uye zvimwe zvekutengesa nekutengesa zviitiko.
Kubva pamakomputa kuenda kune nharembozha, TV yakamisikidzwa kumhepo-mamiriro, GadziraProto ane makore anopfuura makumi maviri 'ruzivo muvatengi zvigadzirwa prototype budiriro. Tinogona kupindura nekukurumidza kune chero chirongwa chekuvandudza chirongwa mumazuva. Isu tinoshanda imwe-yekumira rutsigiro kubva kumumvuri machining kusvika pamusoro kupedzisa. Kurumidza kuenzanisa zvigadzirwa mukati mezvikamu zvese zvegadziriro yekuona kwekutarisa kwezvinhu, chimiro, mashandiro uye kutarisa kwese uye kunzwa.
Isu tine akati wandei kugona mukati medu masevhisi uye maitiro anoenderana neiyo Chigadzirwa Kuvandudza Prototype maindasitiri.
Cnc Kuchengetedza, Cnc Rapid Prototyping, Inokurumidza Prototyping Uye Kugadzira, Kukurumidza Prototyping, 3d Kudhinda & Rapid Prototyping Services, Kurumidza Prototyping,